KULANKA JIMCAHA (Xilliga 3aad) Xalaqada 1aad Al-Saadicuun Bil-Xaq
Kulanka Jimcaha ( Xilliga 3aad ) 02 July 2021
KULANKA JIMCAHA (Xilliga 3aad) Xalaqada 1aad
Xalaqadaan waxaa lagu falanqaynayaa xaqiiqada ah in dadka maanta dunida ku nool ay ka fogaadeen ku dhaqanka diinta islaamka, dagaalna ku qaadeen dadkii soo celin lahaa diinta.
Waxaa looga jawaabayaa Su'aalaha kala ah: Maxey tahay sababaha keenay ka fogaanshahaas diinta laga fogaaday? Maxey tahay saameeynta uu ku yeeshay Fikirka Irjaaiga ah (الفكر الإرجائي) bulshooyinka ku nool dunida islaamka? Maxey tahay saameeynta uu yeeshay Duullaan Maskaxeedkii (الغزو الفكري) ay soo qaadeen cadawga diinta iyo Gaalada?
Su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaad kaga bogan doontaan Xalaqadaan.
Daawasho wacan .
Liis Kulanka Jimcaha ( Xilliga 3aad )
KULANKA JIMCAHA (Xilliga 3aad) Xalaqada 2aad
Xalaqadaan waxaa lagu falanqaynayaa Qallooca Ummadda ka galay Diinta Islaamka inta uu Gaarsiisanyahay . Waxaa looga jawaabayaa Su'aalaha kala ah: Jirrada Caqiidada ku Dhacday inta ay la egtahay ? Yaa ...
KULANKA JIMCAHA (Xilliga 3aad) Xalaqada 3aad
Xalaqadaan waxaa looga hadlayaa Sidee Ummadda Loogu soo Celiyaa Diintii Islaamka ee Saxda aheyd, Loogana saxaa Qallooca ka galay Diinta ee ka muuqda Dhaqankooda . Waxaa looga jawaabayaa Su'aalaha kala ...
KULANKA JIMCAHA (Xilliga 3aad) Xalaqada 4aad
Xalaqadaan waxaa lagu falanqaynayaa KALIMADA TOWXIIDKA ( لا إله إلا الله ) . Waxaa looga jawaabayaa Su'aalaha kala ah: Sidee SAXAABADU u fahmeen Kalimada TOWXIIDKA ? maxaa keenay Dagaalkii & ...